Wararka Maanta: Sabti, May 12, 2012-Mid ka mid ah Askarta Uganda ee ka tirsan AMISOM oo xabsi ku muteystay rasaas uu ka iibiyay wiil Soomaaliyeed
Mubarak Magiri oo ah askarta la xukumay ayaa qirtay inuu ka iibiyay wiil Soomaali ah 35-xabbadood oo rasaas ah 24-kii bishii Maarso ee sannadkan markaasoo uu ku sugnaa mid ka mid ah xeryaha ciidamada Uganda ay ku leeyihiin Muqdisho.
Askariga ayaa lagu xukumay hal sano oo xabsi ah, iyadoo sidoo kalena laga eryay shaqada ciidankam, kaddib markii la sheegay inuu ku guuldareystay inuu ilaaliyo hubkii loogu talogalay inuu isku difaaco.
Qareennadda u doodaya askariga oo lagu magacaabo, Marion Benibella ayaa ka dalbatay maxkamadda in la horkeeno maxkamadda guddiga anshaxa ee dambiga ku helay askariga, si ay uga hor-caddeeyaan maxkamadda, balse taas waa la diiday.
Xukunka askarigan ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo dowladda Uganda ay ciidammo dheeraad ah u soo dirtay Soomaaliya si ay ugu xoojiso AMISOM, iyadoo ay jireen askar ka tirsan Uganda oo horay dambiyo kala duwan loogu eedeeyay.
Ciidamada AMISOM ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 17,000 oo askari waxayna ka socdaan dalalka Uganda, Burundi, Kenya, Jabuuti iyo Sierra Leone, waxayna gacan ka siinayaan ciidamada dowladda KMG ah sidii ay ula wareegi lahayd dalka oo dhan.